LO'DA CAANAHA: SHARAXAAD, SAWIR, FARA BADAN IYO XIISE, DARYEEL IYO DAYACTIR - XOOLAHA
Beeralayda, arrinka xoolaha taranku marwalba waxay noqdeen kuwo maadad ah, taas oo noqon laheyd mid guud ee waxsoosaarka caanaha iyo hilibka.
Siyaabaha Swiss waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah isku dhafkan ugu wanaagsan. Iyadoo dadaalka ugu yar iyo kharashka, wakiillada noocan ah waa mid waxtar leh.
Taariikhda la jebiyey iyo sharaxaadda
Asalka asalka Simmental (ama Bernese) ee lo'da ayaa weli aan la aqoon. Waxaa jira laba hindise oo ku saabsan halka uu ka yimid Simentals. Ugu horeeyay waa in lo'da laga keenay wadamada Scandinavian, iyo kan labaadna wuxuu sheegay in ay ka soo jeedaan safarro duurjoog ah.
Cilmi-baadheyaasha asalka ah ee jinsiga Berne waxay u muuqdaan in ay ka fekerayaan in laga keenay wadamada Scandinavian si Switzerland. Later, muddo dheer, lo'du waxay ka soo baxday bangiyada Bern ee, horey waxaa loo yiqiin Simma, oo dhammeystiran oo soo bandhigay qaababka la yaqaan. Waxay noqdeen kuwo aad u qurux badan oo ka qurux badan, oo laga bilaabo lo'daha aan dhammaystirnayn ayaa u galay mid ka mid ah hilibka ugu wanaagsan iyo caanaha caanaha.
Lo'da Bernese waxaa lagu dhajiyay qiyaaso waaweyn. Inkastoo ay kudhow yihiin dhererka 150 sentimitir, dhererkoodu waa 160. Ragga raga badani waxay gaari karaan miisaan culus, dheddiguna way yar yihiin, miisaankoodu waa kala duwan yahay 600 illaa 800 kiilogaraam.
Tilmaamaha noocyada waa weji adag iyo wejiga weyn. On waxaa inta badan geesaha iftiin ah, taas oo mararka qaarkood madoobaan karo at dhamaadka. Lo'da Bernese waxaa lagu dhajiyay soodhexaad ballaadhan oo horumar leh, taas oo muujinaysa hab nidaamsan oo habeysan oo taranka. Thanks to this Dumarka waxay awoodaan inay soo saaraan caano badan. Cunto lo'da way weyn tahay, maqaarka taabashada waa mid sahlan, laakiin yar oo dabacsan. Nooca candhuuftu ma noqon karo mid guud ahaaneed: inta badan irbadaha danbe ayaa koraaya kan weyn.
Ma taqaanaa? Cawsku wuu ooyaa marka ay dareemaan murugo.
Nooc siman ah waa mid guud. Waa ufiican labada la gowraco iyo soosaarka caanaha, oo leh sifooyin aad u fiican:
Macmacaanku wuxuu ka duwan yahay 3.7% ilaa 4%;
dhadhan cajiib ah;
maadada borotiinka sare.
Inta lagu jiro xilliga nuujinta, hal lo'du wuxuu soo saaraa ilaa 5.5 kun litir oo caano ah.
Sida jajab hilibka, simamaaladu waxay noqdeen kuwo sii caan ah, hadda waxaa badanaa lagu hayaa kaliya in la gowraco. Haddii aad diirada saartid isticmaalka cunnooyinka Bernese, waxaad dooran kartaa sifooyinka ugu muhiimsan hilibka:
weylaha dhallinyarada ah ayaa kor u kaca kilo maalin kasta;
digaagga digaagga ayaa gaarey 55%, iyo dibi - 65%;
Dumarka inta badan waa la laayaa marka ay awood u leeyihiin inay caanaha siiyaan;
ragga waxaa loo ogolyahay inay hilib ilaa laba sano jirsadaan;
Tayada hilibka waa mid aad u sareysa, sababtoo ah dufanka aan ka badnayn 15%.
Iska hubi noocyada caanaha lo'da iyo meelaha caanaha: Cawaanka Caucasian, Sychevskaya, Schwyzka, Krasnogorbatovskaya.
Cawska caadiga ah waa run ahaantii waa mid caalami ah: waxay keenaan ugu yaraan dhibaatooyin, laakiin u dhiib milkiilaha hilib wanaagsan iyo caano delicious ah.
Xayawaanku waxay leeyihiin faa'iidooyin badan:
inta ugu badan ee hilibka dhadhan fiican leh;
sii caano badan xilli kasta;
fududahay in lagu hayo;
u adkaysiga dulinka iyo cudurada;
si fiican u daboolay labadaba dabiiciga ah iyo dabiiciga;
waxay sameeyeen dareenka hooyada;
yeelo deganaansho, dabacsanaan leh.
Simmental Bull Dhibaatooyinka yar yar, waxaa jira dhowr cillado yaryar:
waxaa jira xaalado waxoogaa khalad ah oo lugaha lugaha ah, taas oo ah sababta ay lo'da u socoto uga dhaqso badan tahay kuwa kale;
Sababtoo ah miisaanka weyn ee da'da leh, dhabarka xayawaanku wuxuu ku dhici karaa soodhow;
Cunto yar oo caanaha ah ayaa hoos u dhigtay wax soo saarka hilibka, iyo waliba dhinaca kale. Sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo caanaha lo'da iyo hilibka lo'da, si looga hortago in laga gudbo.
Dayactir iyo daryeel
Shuruudaha gaarka ah ee lo'da ee noocaan this uma baahnid. Si loo bixiyo raaxada simminaleam iyo ka hortagga cudurka, waa inaad raacdaa xeerar yar oo fudud. Waxay caan ku yihiin wax kasta oo lo 'ah waxayna ka caawin doonaan inay gaaraan waxqabad aad u fiican iyada oo aan dadaal badan la sameyn.
Si loo abuuro jawi raaxo leh ee lo'da, waxaan kugula talinaynaa inaad barato sida loo dhiso barn, qalab gabbasho iyo samee xayawaanka xayawaanka leh gacmahaaga.
Dhulka socodka xagaaga
Goobta socodka xagaaga waxaa loogu talagalay in xilliga kuleylaha lo'da ay soo baxaan, nuugaan hawo nadiif ah, soco. On socodka xayawaanku waxay joogi karaan habeenkii. Meelaha la xusay waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso dhismo leh saqaf (shed), taas oo abuuri doona hoos Qalabka noocan oo kale ah waa lagama maarmaan si markaa lo'da aysan qorraxda qallafin oo dareemeyso raaxo inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Xayawaan, oo xayawaanku ku noolaan doonaan inta badan noloshooda, waa inay noqdaan kuwo raaxo leh oo ay ku qalabeeyaan wax kasta oo lagama maarmaan ah. Quudinta waa in ay ahaataa mid qoto dheer leh oo si la doorbido laga saari karo si ay u fududahay in la nadiifiyo. Sida cabitaanka, waxaad isticmaali kartaa suunka caadiga ah. Waxaa muhiim ah in mar kasta jiro biyo. Dhulka meeshiisa oo ah lo'da ku nool waa in ay had iyo jeer noqoto mid nadiif ah oo nadiif ah. Inta badan isticmaal qashinka cawska. Mararka qaar si loo badbaadiyo caws engegay carrada ama peat, oo ah saamiga 1: 2.
Waa muhiim! Haddii aad qoyaan qoyan qoyan, lo'da ayaa ku dhici doonta oo kaliya marka ay dhammaato daal. Tani waxay yareyneysaa qadarka caanaha soo saarey 10-15%.
Xaaladaha ku habboon
Maydhayaasha ayaa aad ugu fiicnaanaya dayactirka in xagaaga ay si ammaan ah u tagi karaan si ay u qaataan habeenkii daaqa ama socodka. Waxay caadiyan u dulqaadan karaan kuleylka iyo qabowga, si ay u dareemaan inay wanaagsan yihiin dalalkeena.
Xilliga jiilaalka, xayawaanka waa in la siiyaa dhaan si fiican u hawo leh. Waxa ugu muhiimsan waa in laga hortago qabsashada, haddii kale lo'da waxay dareemeysaa raaxo la'aan iyo jirro. Heerkulka qolka wuxuu ku kala duwanaan karaa +4 ° C ilaa +20 ° C Xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad abaabulato nalka si markaa lo'da raaco habka maalinlaha ah ee caadiga ah, fahamsan goorta wakhtiga quudinta, caanaha, iwm. Waxaa lagama maarmaan ah in dhererka saacadaha iftiinka maalin walba ay isku mid yihiin, habeenkiina waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo iftiin yar. Waxay u fiicnaan doontaa in lagu rakibo laba lamps shan shandadood.
Ma taqaanaa? Lo'da waxay noqotey rinjiyeyn ka dib sanado badan oo horumar ah. Tani waxay sababtay xaqiiqda ah in lo'du aanay awoodin degdeg ah si ay u ordaan, waxay qabteen cunto, way liqeen oo waxay u socdeen meel xasaasi ah, halkaasoo iyada oo la cunay.
Nadiifinta joogtada ah waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee ilaalinta lo'da. Nadiifinta iyo waqtigeeda nadiifinta qolka waxay yareysaa fursadaha xoolaha qaadaya dulinka. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo habka maalin kasta, loona doorbidaa laba jeer maalintii, subaxa iyo fiidkii. Sidan ayaad ku siin kartaa xayawaanka ugu badan ee xayawaanka, qiyaasta ugu yar ee urta aan fiicnayn ee ka iman karta, iyo sidoo kale inaad hubiso in lo'da ay noqon doonto mid caafimaad leh iyo caano nadiif ah.
Markaad quudineysid raashinka qalalan, sida cawska ama miro, waxaad si fudud u gelin kartaa dufcadda cusub ee nuujiyaha. Cuntadani ma badin doonto mana walaaqi doonto. Haddii aad doorbideyso inaad bixiso hadhuudh la kariyey hadhuudh biyo ama khudrado, ka dibna quudiyaha waa in si joogta ah loo mayraa oo waqtigana loo nadiifiyaa cuntada aan weli la cunin si aanay u sii xumaan. Haddii lo'da cuno booris la cuno, waxay keeni kartaa sumeyn ama xitaa dhimasho. Biyaha kulul ee cabitaanka ayaa sidoo kale loo baahan yahay in la beddelo maalin kasta. Biyaha nadiifku waa fure u noqoshada xayawaanka.
Waa muhiim! Marka xayawaan lagu hayo xarig aan caadi ahayn, calaamadaha tayada caanaha ayaa hoos loo dhigaa, sababtoo ah waxay keenaysaa bakteeriyada inay gasho.
Saameyntu uma baahna isku darka feedhka, laakiin maaddaama ay yihiin xayawaan waaweyn oo waaweyn, waxay u baahan yihiin nafaqo wanaagsan oo joogto ah. Waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo 3 jeer maalintii. Inta badan miro ama caleemo, kalluun hadhuudh la karkariyey waxaa loo isticmaalaa sida isku darka cuntada. Sidoo kale, lo'da waxay noqon doontaa mid aad u faraxsan oo khudradda qudaarta ah, taas oo ah in la qubo biyo.
Waa muhiim in la qalajiyo hayaha qorraxda muddo ka badan 3 saacadood. Tani waxay lagama maarmaan tahay in xooluhu si habboon u qodo cuntada oo aan xanuun lahayn caloosha. Haddii aad dooratey inaad ku quudiso xayawaanka qamadida sarreenka, markaa waa inaad eegtaa tayadeeda: quudinta waa inay noqotaa mid waxtarkeedu sarreeyo, sidaa daraadeed ma jiraan wax khasaare ah oo laga yaabo inay waxyeelo u geystaan ​​caloosha oo u horseeda dareemo xanuun badan.
Socodka lo'da iyo daaqa
Markaad ku socoto daaqa, xayawaanka uma baahna quudin dheeraad ah inta lagu jiro maalinta, inkasta oo subaxda iyo fiidkii waxaad ku ridi kartaa hay ama miro ku jira quudinta. Cows ayaa si fiican u cunaya cawska cusub ee cawska, sidaas darteed xitaa waxay ka tagayaan halkaas habeenkii xagaaga. Waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo nuujiyeyaasha leh qadar cunto ah sidaa darteed cuntada ka dib xayawaanka aan wax badan ka hadhin. Tani waxay lagama maarmaan tahay in la hubiyo in lo'da gebi ahaanba cufan oo aan gaajo lahayn, haddii kale caano cufan ayaa si weyn hoos u dhigi doonta.
Akhri sida loogu beerayo lo'da daaqsinka.
Kala duwanaanshaha quudinta xilliga qaboobaha
Xilliga jiilaalka, xayawaanku wuxuu helaa nafaqooyin ka yar xilliyada kale, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la sifeeyo cuntada xoolaha, ku dar faytamiin iyo macdano badan. Badanaa isticmaal quudinta dheeriga ah ee la kariyey hadhuudhka la kariyey, khudaarta. Waxa kale oo muhiim ah in la kormeero inta jeer ee quudinta: qaansiirka qaangaarka ah waa in la siiyaa cunto 2-3 jeer maalintii.
Wax-qabad jilbaha xoolaha dhalinyarada ah
Xayawaanka waxay gaarsiiyaan qaangaadhka galmada da'da 2.5 sano. Dhallaanka ugu horreeya wuxuu badanaa ku jiraa 31 bilood. Lo'da waxay keeni kartaa kubbadda cusub sanadkiiba mar iyo badh. Uurku wuxuu soconayaa 283 maalmood. Dhalida ilmaha dhalashada, gargaarka bani'aadamnimada looma baahna. Si loo aqoonsado xilliga ugu wanaagsan ee la isku daro, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado mudada geedka ugaadhsiga. Waqtigaan, isbeddellada qaarkood ayaa ka dhacaya hab dhaqanka haweenka:
waxay noqonaysaa mid aad u jecel;
moos aan sabab lahayn;
qaadashada suunka laysku daro, isku dayo in uu sameeyo qafis shakhsiyaadka kale;
iyada oo aan sababo u wareegin deyrka;
dareemid la ogaan karo oo cunto xumo ah.
Waa muhiim! Isbedelada muuqaalka jirka ee xilliga ugaadhsiga ayaa dib udhigaya naqshada iyo dheecaanka xuubka ka soo baxa faashadda.
Buundooyinku waxay dareemayaan si cad oo ah xilliga uu lo'da u diyaarsan yahay in la duwo, waxayna u dhaqmaan si aad u daran. Tani waa habka labaad ee aan la isku hallayn karin si loo go'aamiyo waqtiga ugu habboon ee lagu maareynayo.
Dibiga ayaa ku dhasha miisaanka 50 kiilogaraam. Laga bilaabo daqiiqadaha ugu horreeya ee nolosha, xayawaanku wuxuu isku dayaa inuu istaago, ka dib laba saacadood oo jiritaan, wuxuu helaa candho xoolo. Lo'da suntu waxay leedahay dareen hooyo oo fiican waxayna awoodaan inay quudiyaan carruurtooda. Dhallinyaradu waxay helayaan ilaa 1.5 kg oo miisaan ah maalintii Haddii aad go'aansato inaad ilmaha ka qaadatid hooyada, waa inaad u wareejisaa cuntada shakhsi ahaaneed. Isla markiiba dhalashada, Dibiga ayaa la siiyaa dibi, waxaa ku jira nafaqooyin badan, iyo sidoo kale dammaanad qaadka caafimaadka mustaqbalka ee ilmaha, awooddiisa inuu ka hor tago cudurada iyo dulin. Saddex maalmood ka dib dhalmada, kolosku wuxuu noqonayaa caano caadi ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad dibi ugu dhigto inta ugu badan. Cuntadu waxay u baahan tahay 2 saacadood kasta. Ka dib markaad cunaysid xayawaanka xayawaanka waa in lagu tirtiraa maro nadiif ah. Laga bilaabo maalinta lixaad ee nolosha, waxaad ilmahaaga u bari kartaa cabitaanka baaldi. Maalinta siddeedaad, waa inaad bilowdid in yar oo caano ah lagu daro caanaha, sidoo kale wuxuu ku barayaa inaad cunto cuno. Saddex usbuuc, waxay bilaabaan inay quudiyaan isaga oo leh suunka suunka, sida balka ka soo khudaarta. Si aad u siisid jirkaaga qadarka saxda ah ee macdanta, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo isku dar ah cusbo, nuuro iyo hilib iyo lafo.
Baro sida loo doorto kubka marka la gadanayo iyo waxa loo baahan yahay in lagu daro cuntada xayawaanka yar yar.
Daaqadda, Dibiga waa inuu noqdaa mid qalalan oo nadiif ah. Ilmuhu waa in lagu nadiifiyaa buraashka, biyo raaci biyo adag oo tirtir maro nadiif ah oo qallalan.
Kadib bil walba, xayawaanku waa la sii deyn karaa socodka gaaban, mar kasta oo kordhiya wakhtiga waddada. Xilliga xagaaga, waxaad u baahan tahay inaad barato ilmahaaga inuu cuno cawska daaqa. Sumashadu waa jinsiyad guud oo ah lo'da. Iyadoo dadaal yar, waxay keeni karaan hilib wanaagsan iyo caano badan oo caan u ah kooxda. Cunto kasta oo beeraley ah, lo'da Bernese waa mid aad u qiimo badan waana jecel yahay sifooyinkan.